Keydso ilaa 97% xirmadan balastar-ka ah iyo wax ka badan | Abuurista khadka tooska ah
Manuel Ramirez | | habyaalada, dhowr
Waxaan leenahay mid kale dalab gaar ah oo ah 250 sheybaar iyo jees jees kaararka ganacsiga, waraaqo iyo wax badan oo aad ku keydin karto $ 1333. A pack pack of arrimo si aad u daboosho dhammaan baahiyaha macaamiisha dalbanaya.
Si kale haddii loo dhigo, waxaan ka hadlaynaa megapack taas qiimahiisu noqon lahaa $ 1362, laakiin maxaa ku jira dalabkan waxaad ku haysan doontaa gacantaada 29 doolar. Guud ahaan waxaa jira 195 sheybaar oo la daabacayo iyo 55 majaajillo ah oo aad ku dhihi karto haa macaamil codsanaya naqshad gaar ah.
1 Astaamaha ugu muhiimsan ee xirmadaan oo ah 250 shey iyo mockups
2 Xirmo ah 250 Mockups iyo Flyer Templates iyo in ka badan: Warbixin Sanadeed
3 Xirmooyinka 250 Mockups iyo waraaqaha arrimo iyo in ka badan: kaararka ganacsiga
4 Xirmo ah 250 jees jees ah iyo tusaalooyin xaashiyaha iyo inbadan: madaxyada shirkadaha iyo xaashiyaha baararka
5 Xirmo ah 250 Mockups iyo Daabacadaha Flyer iyo in ka badan: Mockups Card
6 Xirmo ka kooban 250 Mockups iyo waraaqaha arrimo iyo in ka badan: xarfaha
7 Xirmo ah 250 Mockups iyo waraaqaha arrimo iyo in ka badan: xaashiyaha loo qaybiyo
Astaamaha ugu muhiimsan ee xirmadaan oo ah 250 shey iyo mockups
Megapack-kan waxaa ku jira 195 naqshadood oo kala duwan, oo isugu jira waraaqo xaashi ah, kaararka ganacsiga iyo waxyaabo kale oo badan. Sidoo kale ku dar 55 jees jees buuxa ah taas oo aad ku beddeli karto midabada, asalka iyo dib u soo celinta dhammaan qaybaha garaafka. Sidan oo kale, waxaad awoodi doontaa inaad si fiican ula qabsato dalabyada macmiil kasta oo aad u siiso noocyo kale oo adeeg ah kuwa illaa hadda ka hor istaagay maal-gashiga maaliyadeed.
Kuwani waa kuwa ugu waaweyns muuqaalada xirmadaan oo ah 250 shey daabacaadda:
195 faylal ah PSD diyaar u ah in wax laga beddelo ujeedooyinkaaga xirfadeed.
59 kaararka ganacsiga.
106 waraaqo shirkadeed.
3 soo koobid.
Xirmo loo diyaariyey in lagu isticmaalo Adobe Photoshop Cs5 ama ka dib.
Si wanaagsan ayaa loogu abaabulay lakabyo iyo kooxo midab leh.
Walxaha "Smart" si loo helo sawiradaada si fudud oo fudud.
Diyaar u ah in lagu daabaco qaab midabeedka CMYK iyo qaraar dhan 300 dpi.
Gebi ahaanba qoraallo iyo sawirro bilaash ah ayaa la isticmaalay.
ka astaamaha ugu waaweyn ee jees jees:
55 faylasha PSD oo diyaar u ah in wax laga beddelo.
3 baakadood oo kaftanka kaararka ganacsiga ah oo leh 15 shey, 3 xirmo oo xaashi ah oo xaashi ah oo leh 28 sheybaar, 7 mockups ah oo xafiisyada ah, 5 casuumaad iyo kaarka mockups.
Waxaad isticmaali kartaa Adobe Photoshop CS5 ama nooc dambe.
Si qumman abaabulay lakabyo iyo lambarro midab leh koox koox.
Faylasha waa xallin sare si loo gaaro 3.000 x ppm X XUMAY.
Waxaad u adeegsan kartaa walxaha "caqliga badan" si aad si fudud ugu dejiso naqshadeyntaada mid kasta oo ka mid ah jeesjeesyada.
Sidaad u maleyn karto, waa a xirmo xaashi ah oo aad u dhameystiran iyo kaararka ganacsiga si loo qeexo dhammaan noocyada kala duwan sida aan u sheegayno xiga. Adiga oo haysta qayb wanaagsan oo ka mid ah shaqadii hore loo qabtay, waxaad u baahan doontaa oo keliya inaad u habeysid jeesjeeska macmiilka oo aad markaa iyaga siiso si ay u eegaan.
Xirmo ah 250 Mockups iyo Flyer Templates iyo in ka badan: Warbixin Sanadeed
Warbixinta Sannadlaha ah ayaa noo oggolaaneysa inaan yeelano a dabool ku habboon warbixinta sanadlaha ah ee shirkadda oo leh garaafyo taxane ah oo ballaadhan si loo muujiyo heerka xirfadeed ee shirkadda aad la shaqeyneyso.
Waxay ku saleysan tahay naqshadaha hadda jira oo leh nooc kasta oo qaabab ah, in kastoo gooladaha qallooca ayaa adkaada taas oo u kala qaybsan dhamaan kooxda. Warbixinta Sannadlaha ah waxay leedahay qaabab badan oo kala duwan waxayna na tusaysaa habka loo hirgaliyo sawirradeena u gaarka ah sidaas awgeedna waxaan siineynaa bartaas shaqsiyeed daboolka.
Waa in la yiraahdaa ma lahan sawiradeeda, marka tani waa a qayb ka mid ah shaqada oo noqon doonta markigeenna fuliya. Warbixinta Sannadlaha ah waa daboolka ugu habboon ee nooc kasta oo shaqo ah oo ku saabsan wax shirkadeed ama ganacsi. Waxaan ku siin karnaa ujeedo kale oo u gaar ah adoo adeegsanaya qaab qoraal ah iyo sawiro kala duwan, maxaa yeelay waxay leedahay tiro fara badan oo kala duwanaansho ah, taas oo ku dareysa qiime aad u weyn xirmadan oo dhan ee qaabab iyo majaajillo ah.
Xirmooyinka 250 Mockups iyo waraaqaha arrimo iyo in ka badan: kaararka ganacsiga
Waxaan ugu dhawaan dhihi karnaa isku si kaararka ganacsiga taas Waxay xiriir dhow la leeyihiin Warbixinta Sannadlaha ah iyo in ay ku wajahan yihiin macmiilkaas dalbanaya ee raadinaya kaarka soo bandhigida ugu fiican daqiiqada ugu horaysa ee ay is gacan qaadaan.
Un naqshad nadiif ah oo leh midab weyn oo casaan ah iyo khadad taxane ah, iyo waliba qaabab joomatari ah, kuwaas oo awood u leh inay kala soocaan xogta ganacsiga ugu muhiimsan sida emailka, goobta, magaca wakiilka iyo waliba astaanta shirkadda.
Kaararka ganacsiga oo tayo sare leh iyo oo saameyn weyn ku leh muuqaalka. Marka laga reebo casaanka sidoo kale waxaa jira midabbo kale sida madow iyo sidoo kale muuqaal muuqaal ah oo u muuqda inuu uur ku yeelanayo dareenka nasashada macaamiil kasta oo u baahan kara adeegyada shirkadeena.
Tirada badan ee tusaalooyinka kaararka ganacsiga iyo jeesjeeska ayaa naga hor mariya a buug weyn oo leh nuucyo kala duwan oo naqshado ah, inkasta oo, sidaan soo sheegnay, aan aragno khadad dheellitiran ama qaloocsan oo u muuqda inay uur yeelanayaan dhammaan kaararka ganacsiga oo leh muuqaal tilmaam ah. Sidoo kale waa isku mid midabada midabbada casaanka leh, liinta, cirka buluugga ah ama cowska oo iyana qayb weyn ka ah qaar ka mid ah kaararka ugu xiisaha badan.
59 kaararka ganacsiga oo wali muujinaya tayada weyn ee wax walba baakada weyn ee moodellada iyo jeesjeesyada loogu talagalay waraaqaha iyo madaxyadaas oo sida caadiga ah aan eegno ugu yaraan daqiiqado ku habboon.
Xirmo ah 250 jees jees ah iyo tusaalooyin xaashiyaha iyo inbadan: madaxyada shirkadaha iyo xaashiyaha baararka
Tani waa mid kale oo ka mid ah xayeysiisyada waawayn ee xirmadan adigoo leh a tiro wanaagsan oo ah madaxyada shirkadaha iyo xaashiyaha waraaqaha. Waxaa jira wadar ahaan 109 inay naga farxiyaan nashqaddaas ganacsi oo ay kudeeqeen xariiqyo iyo midabbo sifiican isula jaan qaadaya si sifiican loogu kala sooco waxyaabaha kujira
Waxaan ku sii wadeynaa isla dareen isku mid ah iyo qaabab toosan qaar ka mid ah madaxyada si aan u siino noocyo badan xirmada oo dhan. Sawirada kuma jiraan, laakiin tani maahan sababta ugu weyn ee loo soo iibsaday xirmadan, maaddaama waxa na daneynaya ay yihiin arrimo si aan ugu qaabeyn karno sida aan dooneyno.
Xalka kale ee aan hayno ayaa ah inaan isku darno qaar ka mid ah sheybaarada haddii aan ogaanno in qaar ka mid ah shaxanka ay ku imaan karaan mid kale. Caadi ahaan waxay leeyihiin midab guud, sida casaanka koowaad ama buluuga, sidaas waxay si fudud ugu jiidan doontaa Adobe Photoshop si hal meel looga gudbiyo.
Mawduucyada kaladuwan waxay u dhexeeyaan meheradaha khadadkaas iyo qaabka qaab qoraalka, illaa muxuu noqon lahaa xaashiyaha buuxa ee bogga taas oo aan ku dhawaaqi karno xaflad qalin ah oo leh buluugga iyo codadka badda, iyo sidoo kale dhammaadka sanadka sanadka oo leh midabyo casaan ah oo habboon. Waxaa sidoo kale jira mid loogu talagalay xisbiyada xarrago iyo muuqaal weyn, gaar ahaan farta lagu xushay midabkeeda.
Baakadani sidoo kale waxaa ku jira qaabab ka fudud oo leh naqshad yar oo laga heli karo xagga sare iyo hoose ee shaxanka. Waxa ugu fiican ayaa ah inaad fiiriso si aad u siiso qiimo weyn xirmo la socda dalab aan la dafiri karin oo ah 97%; kan oo kale maalmo ka hor.
Xirmo ah 250 Mockups iyo Daabacadaha Flyer iyo in ka badan: Mockups Card
Mid kale oo ka mid ah qodobbada muhiimka ah ee xirmadan xaashiyaha xaashiyaha ah iyo inbadan ayaa ah jeesjeesyada kaararka ganacsiga. U fiirso mid ka mid ah taas oo madow iyo jaalle ayaa u badan, gaar ahaan siinta qaabka kaarka ganacsiga oo leh joogitaan muuqda. Way ku fududahay fikradeeda, maadaama midabka madow uu dhabarka u dhacayo, halka dhanka hore ay isticmaasho midabka jaallaha ah iyo qaab xarrago leh oo muuqaal ah oo muujinaya wakiilkiisa.
Font inteeda kale waxay ku jirtaa madow si loogu banneeyo geesaha loo qurxiyay habka ugu yar, laakiin leh dhameystir weyn. Jees jeeskani wuxuu sidoo kale kuu oggolaanayaa inaad ku ciyaarto midabbo kala duwan si aad u siiso taabashadeenna; sida haddii ay nagu dhacdo inaan u adeegsanno lambar QR ah astaan ​​ahaan oo markaa u oggolaan macmiilka inuu ku baaro moobilkiisa. Mid kale oo ka mid ah noocyada asalka ah ee suuq geynta ee xirmadan 250 jees jees iyo moodello loogu talagalay kaararka ganacsiga iyo inbadan ayaa na siisa.
Xirmo ka kooban 250 Mockups iyo waraaqaha arrimo iyo in ka badan: xarfaha
Waxaan sidoo kale ka tagnaa meel yar waraaqaha dhalashada qaarkood oo iyagu iskood u taagan sidii alaab asal ah. Iyada oo casaan ah sida midabka nooca qoraalka iyo baqshad si wanaagsan loogu fuliyay naqshadda oo leh midabka casaanka markale iyo midab huruud ah oo dhalaalaya. Baakadani waxay ka kooban tahay noocyadan dheeri ah ee ku dhejinaya digaagga keega.
Xirmo ah 250 Mockups iyo waraaqaha arrimo iyo in ka badan: xaashiyaha loo qaybiyo
Mararka qaarkood waa inaad jiido hababka dhaqameed badan sida kuwa xajmiga xajmiga A4 ah. Maaha inaan ku qaybinno agagaarka xaafad duug ah, oo waliba suuragal noqon karta, laakiin inaan uga tagno miiska meesha aan ku caddeyn karno ujeedooyinka shirkadeena ama adeegyada uu bixiyo macmiil gaar ah.
Baakadani waxay kaloo leedahay a noocyo badan oo kala duwan sida ay yihiin triptychs. Naqshadeynta foorjeynta xaashida 'flyer' waxay raacaan qaanuunka lagu soo rogay xirmada oo dhan si aan loo dhaafin wax faahfaahin ah.
Marka la soo koobo, a baakad weyn oo ah jees jees iyo tusaalooyin loogu talagalay waraaqaha, kaararka ganacsiga iyo waxyaabo kaloo badan in, qiimaha aad ku heli kartid, taas oo ah, ku dhowaad $ 29, ay ka badan tahay fursad weyn in lagu ballaariyo buugaagta dalabyada hay'addaada ama shaqadaada sida madax-bannaanida.
Ha ka waaban iyo iibso dhammaan 250 sheybaar ka hor inta iibku dhammaan
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » habyaalada » Ku keydi ilaa $ 1333 dalabkan gaarka ah oo ah 250 sheybaar iyo jees jees kaararka ganacsiga, xaashiyaha iyo wixii intaa ka badan